अमेरिका–इरान तनावको असर यस्तो हुदै छ नेपालमा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिका–इरान तनावको असर यस्तो हुदै छ नेपालमा !
अमेरिका–इरान तनावको असर यस्तो हुदै छ नेपालमा !
2,751 Less thanaminute
अमेरिका र इरानबीच बढेको तनावको असर नेपालसम्म देखिएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । अमेरिकी आ क्रमणमा शुक्रबार इरानी सेनाको विशेष दस्ता क्विड फोर्सका सैनिक कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानी मा रिएपछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।
बदलामा इराकस्थित अमेरिकी दूतावासनजिक रकेट आ क्रमण भएको थियो । केन्यास्थित अमेरिकी दूतावासमा पनि आ क्रमण भएपछि अमेरिकाले आफ्ना दूतावासहरूमा समेत सतर्कता बढाएको छ । त्यहीअनुसार दूतावासआसपास सुरक्षामा थप कडाइ गरिएको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसबारे अनौपचारिक रूपमा नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कुरा गरिसकेका छन् । ‘नेपाल मात्र होइन सबै देशका आफ्ना दूतावासहरूमा उनीहरूले सतर्कता बढाएका छन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यहीअनुसार प्रहरी परिचालन बढाइएको छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सो घटनाको बदलामा कुनै पनि देशमा अमेरिकी नियोगमा आ क्रमण हुन सक्ने आकलनका आधारमा पूर्वसतर्कता अपनाइएको हो । अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीबाट इन्स्पेक्टरको कमान्डमा पहिलेदेखि नै प्रहरी टोली खटिँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि दूतावासआसपास गस्ती बढाएको छ ।
गत महिना मात्र प्रकाशित रिपोर्टमा अमेरिकाले नेपाल आ’तंक’वा’दको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि, नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आ’तंक’वा’दी समूहको गतिविधि देखिएको छैन । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण यस्तो जोखिम औँल्याइएको हो । भारतमा भने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आ’तंक’वा’दी समूह सक्रिय छन् ।
होमवर्क नगरेको भन्दै विद्यार्थीलाई यति हदसम्मको या’तना : शिक्षक फरार, विद्यालय बन्द
कोरोना कहरकाबिच भगवान् शिवको चरणमा पुगे साउनको अन्तिम सोमबार दर्शनार्थीहरु